Maalinta: Sebtember 29, 2017
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay, “Incirli Metrobus Station 1 waa la xiri doonaa sababo la xiriira dayactirka iyo howlaha dayactirka laga bilaabo 00.00 illaa 19.00 October Sunday Ekim. Dowlada hoose ee magaalada Istanbul war qoraal ah oo ay horey u soo saartay “İncirli [More ...]
Agaasimaha Guud ee Badeecadaha Khatarta ah iyo Isku-darka Gaadiidka (TMKT) iyo mas'uuliyiinta heerarka Turkiga (TSE) ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa booqday TÜDEMSAŞ. Kaaliyaha Maareeyaha Guud ee TMKT Sinan Kuşcu, TSE [More ...]
Isku soo wada duuboo wareejinta xad-dhaafka ah ee bixitaanka Elphinstone Station ee Mumbai, India, ugu yaraan dadka 22 ayaa la diley dadka 30na waa la dhaawacay. Wadada 'Elphinstone Street' ee magaalada Mumbai, India [More ...]
3 wuxuu ka socdaa Istanbul. Shaqaalaha garoonka diyaaradaha waxay la wadaageen culeyskooda wax soo saar, saarida waqti dhaaf xad dhaaf ah, sharci daro iyo dhaqano aan sharci aheyn oo ku saabsan xaaladaha shaqada ee dadweynaha iyadoo loo marayo warqad loo diray soL. Erdogan 29 bishii Oktoobar [More ...]
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Istanbul waxay doorteen Madaxweynaha cusub ee Istanbul shir aan caadi aheyn. Duqa magaalada Başakşehir Mevlüt Uysal iyo Beylikdüzü Duqa magaalada Ekrem İmamoğlu ayaa ku tartamay doorashada, AK Party ayaa u codeeyay Mevlüt Uysal 179 [More ...]
Yoldere by taageerada waxa ka heshay Midowga Yurub sameeyay, qaybta ugu horeysay Turkey ee tareenka ee barnaamijyada tababarka xirfadaha ay tababarayaal degaanka la fuliyaa "Ray alxanle waa Sertifikalanıy" Mashruuca ayaa lagu soo gabagabeeyey. Alümünotermit markii ugu horeysay ee Turkey hoos Ray Mashruuca [More ...]
Kocaeli Köseköy Xarunta Soodhaweynta II Marxaladda Dhismaha Dhismaha
Agaasinka Magaalada Caasimadda ah ee Dhallinyarda iyo Cayaaraha, oo sii wata hawlihiisa ka dhex jira Golaha Carruurta IMM, ee loogu talagalay in ay ku noolaato nolol caafimaad leh 'Baaskiillada Caruurta ee Haydi ee Iskuulka' oo la abaabulay. Golaha carruurta IMM, kor u qaadista wacyiga ku saabsan nolosha caafimaadka leh [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Gaziantep waxay ku dartay Basaska yaryar ee 30 oo loogu magacdaray Poyraz diyaaradooda gaadiid. Magaaladu waxay taageertay balaarinta iskuxirka gaadiidka ee wata basas cusub. Basaska yaryar ee loo yaqaan '30 basaska yaryar' waxaa lagu soo daray safarada gaadiidka. [More ...]
Izmit - Istanbul Tuzla Line 200'de wuxuu si lama filaan ah ugu garaacay eeyga hortiisa, ka dibna daaweynta rakaabka inkasta oo ay jawaabtu tahay darawalka Gaadiidka Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli Eren Karadaş, Eren Karadaş, Madaxweynaha [More ...]
Dhismayaasha taariikhiga ah ee saldhigga Haydarpasa
Howlaha dib u soo celinta ayaa ka sii soconaya Xarunta tareenka ee Hayrdarpaşa. Si kastaba ha noqotee, tani maahan kiiska loogu talagalay 10 dhismayaasha taariikhiga ah ee ka diiwaan gashan dhulka. Sida ay sheegeen khubaro, marka loo eego horumarinta tareenka, dhismayaasha taariikhiga ah ayaa la dayactiray, [More ...]
Milkiilaha shinida ee maalgashiga Thrace
Ahin Gobolkeennu aad ayuu xeeladeedu muhiim u tahay uguna wacan tahay u dhawaanshaha magaalada Istanbul iyo meesha uu ku xidhayo waddankeenna Yurub. Xiddiga ifaysa Turkey ayaa marka la eego logistics, "ayuu dhawaan sheegay in Thrace [More ...]
Tareenka oo ka socda Kurtalan ilaa Siirt
AK Parti, Siirt ku xigeenkii Yasin Aktay, degmada Kurtalan ee jidka tareenka ee Siirt ayaa ku dhawaaqday in hindise loo sameeyay mashruuca. Xildhibaanka Xildhibaan Xildhibaan, wuxuu ku qoray qoraal uu ku qoray, Maamulaha Guud ee TCDD İsa Apaydınkhadka tareenka [More ...]
Adeegga Cuntada Turkiga baabuur Warshadaha Alınacaktır TÜVASAŞ / IIBSIGA shuqullada DEPARTMENT OF guddiga AREAS iyo iibsiga adeega qandaraasyada la soo iibsiga Public Law No. 4734 nidaamka curdan furan sida Qodobka 19 [More ...]